Sina voalohany firenena manerantany nanangana pasipaoron'ny virus | Vaovao momba ny fiaramanidina
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Sina izay firenena voalohany manerantany nanangana pasipaoron'ny virus
Sina izay firenena voalohany manerantany nanangana pasipaoron'ny virus
Nanangana Passport Virus Green tamin'ny endrika programa fanamarinana ara-pahasalamana i Sina ary heverina ho “Passport Virus” voalohany fantatra eran'izao tontolo izao.
Ity programa ity dia misy kaody QR misy kaody voafina ahafahan'ny manampahefana any amin'ny firenena hafa mahazo fampahalalana momba ny fahasalamana an'ireo mpizahatany avy any Shina.
Etazonia sy Grande-Bretagne dia anisan'ny firenena mikasa ny hampihatra fahazoan-dàlana mitovy amin'izany izay afaka mihetsika toy ny pasipaoron'ny virus.
Ny fanamby hamerenana ny dia manerana izao tontolo izao dia ny hizara teknolojia manome antoka ny rafitra pasipaoro fitoviana zarazarain'ny ankamaroan'ny firenena.
Nanambara i Sina fa pasipaoro virosy maitso, na taratasy fanamarinana ara-pahasalamana, dia ho taratasy fanamarinana nomerika na taratasy mampiseho ny satan'ny vaksinin'ny olom-pirenena iray sy ny valin'ny fitsapana sy ny swabs natao. Ny taratasy fanamarinana dia azo alaina amin'ny alàlan'ny sehatra WeChat izay natomboka omaly, ho an'ny olom-pirenena sinoa ihany izy io amin'ny voalohany ary tsy ho voatery.
Ny programa sinoa dia misy an kaody QR voaaro izay mamela ny manampahefana any amin'ny firenena hafa hahazo ny mombamomba ny fahasalamana an'ireo mpizahatany avy any Shina. Ny kaody QR momba ny fahasalamana ao anatin'ny WeChat sy ireo fampiharana finday avo lenta sinoa dia efa takiana mba hidirana amin'ny fitaterana an-toerana sy toerana malalaka ho an'ny daholobe any Shina.
Navoaka ny taratasy fanamarinana “hanampiana amin'ny fampiroboroboana ny famerenana amin'ny laoniny ny toekarena manerantany ary hanamorana ny fivezivezena manerana ny sisintany”, hoy ny mpitondra tenin'ny minisiteran'ny raharaham-bahiny. Na izany aza, ny taratasy fanamarinana ara-pahasalamana iraisam-pirenena dia tsy misy afa-tsy ho an'ny olom-pirenena sinoa ihany no mampiasa azy ary mbola tsy voatery.
Etazonia sy Grande-Bretagne dia anisan'ny firenena mandinika ny fampiharana fahazoan-dàlana mitovy amin'izany izay afaka mihetsika a pasipaoron'ny virus. Ny Vondrona Eropeana koa dia miasa amin'ny vaksinin'ny “pass green” izay ahafahan'ny olom-pirenena mandeha eo anelanelan'ny firenena mpikambana sy ny any ivelany.
Nikarakara ny tenany ihany koa ny Airlines mba hamokatra pasipaoro fahasalamana nomerika izay mitovy fanamiana amin'ny mpitatitra betsaka indrindra. Eto, IATA dia naka ny saha miaraka amin'ny Travel Pass, izay efa sedraina amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka sasany ary hiditra amin'ny dingana mandroso amin'ny làlana London-Singapore manomboka ny 15 martsa.
Ny fanamby hamerenana indray ny dia manerana izao tontolo izao - araka ny efa nanasongadinana ireo mpilalao marobe amin'ny sehatry ny fitsangatsanganana - dia ny hizara teknolojia na hampiasa fitaovana iray hiantohana ny rafitra pasipaoro fitoviana zarain'ny ankamaroan'ny firenena sy ny indostria.